Hadalo "deel-qaaf ah" kana soo yeeray Farmaajo oo la cambaareeyay
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku cambaareeyay madaxweynaha waqtiga kasii dhacayo ee Farmaajo hadaladii uu ka jeediyey xiritaanka shirkii arrimaha doorashooyinka 2020-21.
Hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Wadajir oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Muqdisho ayaa ku tilmaamay hadaladaas "kuwa meel ka dhac ah ku ah" mansabka madaxtinimo ee waddankan soo kabanaya uu ka hayo.
Wasiirkii hore ee Qorsheynta Soomaaliya oo "deel-qaaf" ku qeexay mar-marsiyada madaxweynaha ee ah in uu ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah ayaa ku eedeeyay in mudadii xafiiska joogay uu ka shaqeynayey kororsi.
Warsame oo soo dhaweeyay natiijadii kasoo baxdey shirka dowlada iyo maamulada ee Muqdisho ayaa carabka ku adkeeyay in heshiiskaas uu dalka ka badbaadiyey xaalad qalafsan oo uu geli lahaa kala guurka dartiisa.
"Farmaajo wuxuu ka tanaasulay muddo kororsi, oo ka shaqeyneyay muddadii uu joogay, isagoon doorashada qof iyo cod hal tallaabo dhankeeda u qaadin intii uu joogay. Sidoo kale madaxda Dowlad Goboleedyada waa iney xaqiijiyaan meel marinta hishiiskaan," ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay Facebook-ga.
Madaxda dowlad goboleedyadda oo uu ugu baaqay in aysan Muqdisho ka tagin illaa heshiiskaas uu dhaqan-gal noqdo ayuu xusay in ay uga cudur-daarayaan erayadaas kasoo yeeray mas'uulka ugu sareeya ee waddanka.
Baarlamaanka federaalka ah oo loo gudbin doonaa heshiiskaas si ay u meelmariyaan isla markaana dowlada iyo maamulada ay fuliyaan ayuu ugu baaqay in ay ansixiyaan maadaama xilliga uu gabaabasi ka yahay.
"Eeda in doorasho qof iyo cod la qabto xukuumaddaa iska lahayd, dowladda uu madaxweynaha hogaaminayey ayaa iska lahayd, sidaas daraadeed, fashilka mas'uuliyaddaas qayb haka noqonina una diyaar-garooba in dalka uu doorasho u dareero oo wax caqabada aadan ku noqonina heshiiskaas," ayuu xusay.
Muddo xileedka baarlamaanka haatan jooga wuxuu dhacayaa November, 2020, halka Farmaajo uu ka dhamaanayo bisha Febraayo sanadka dambe 2021.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayey casho sharaf lagu soo xiray wadahadalo Muqdisho ayaa shaaca ka dhigay in uu doorasho qof iyo cod ah uga tanaasulay; in qaranka aanu kala go'in iyo in aysan imaanin faragelin shisheeye.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kulan-madaxeedkan uusan waqtigiisa ku qabsoomi karin.
DF oo lagu eedeeyay in ay ku fashilantay isu-keenista saamileyda
Soomaliya 26.02.2020. 12:35
Guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo eedeyn xoogan loo jeediyey
Soomaliya 24.02.2020. 07:30
Talaabooyin la qaadayo hadii DF ay diido doorasho oo "la diyaariyey"
Soomaliya 24.02.2020. 06:30
Fahfaahinta kulamo dhexmaray Farmaajo iyo Shakuur oo la shaaciyey
Soomaliya 05.10.2020. 09:06
Farmaajo oo safiiro cusub ku qaabilay Madaxtooyada Soomaaliya
Soomaliya 10.04.2019. 17:05
Farmaajo oo ka baaqday Shir caalami ah, una diray Wasiirka Arrimaha Dibadda
War Saxaafaded 31.03.2019. 11:13